ရပ်ကွက်ထဲ လူတယောက် COVIDပိုးတွေ့တာ နဲ့ ကမ္ဘာပျက် သလား အောက်မေ့ ရတဲ့ ပညာဉာဏ်နိမ့်ပါးတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေ – Zartiman
မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတာက ထိတွေ့ လူနာတွေ ပိုးရှိ လူနာတွေ နေထိုင်ရာ အနီးအနား သွားပြီး live တွေ လွှင့်ပြီး ဘာလုပ်ကြတာလဲ နား မလည်ဘူး.. လူတွေကို ပို အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေ တယ် မဟုတ်လား ? အခုပဲ မြန်မာပြည်ကြီး ပျက်တော့မယ့် အတိုင်း ရေးပြော နေကြ တယ်ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတာတွေကို လိုက်နာမယ်.. Mask တပ်မယ်.. လက်ဆေးမယ်.. လူစုလူဝေး ရှောင်မယ်.. ။
ကူးစက် ခံရသူနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ကို အချိန်မှီ သတင်းပို့မယ်.. Q ဝင်မယ်.. တာဝန်သိသိ လိုက်နာရင်း ဒုတိယလှိုင်း ကို ကျော်ဖြတ်ရဖို့ လုပ်ရမယ်.. သတင်းတွေဖွ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက် အခြားသူတွေကိုလည်း အကြောက် တရား လိုက်သွင်းပြီး ဘာ လုပ်ကြမှာလဲ။လက်ရှိ တစ်မိနစ်ကို လူတယောက်နှုန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံနေရတဲ့ ဂျာမနီမှာ ကျွန်တော် နေပါတယ်။
စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီး အိမ်ထဲအောင်းနေလို့ မရပါဘူး.. လူတိုင်း ကိုယ်ဆီ တာဝန်တွေ အရ အပြင်ကို ထွက်နေရပါတယ်.. ကျန်းမာရေးဌာနက ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း Mask တပ်တယ် လက်ဆေးလို့ ရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လက်ကို ဆေးပါတယ်.. အခြားသူ တဦးဦး နဲ့ အနည်းဆုံး (၆)ပေ အကွာမှာ နေပါတယ်…။ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတိုင်း မသေပါဘူး.. ။
သို့သော် ကူးစက်မှု မခံရဖို့တော့ အရေးတကြီး ကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နားမလည်နိုင်တာက မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကိစ္စတွေ ကိုပါ.. ရပ် ကွက်ထဲ လူတယောက် ရောဂါပိုးတွေ့တာ နဲ့ ကမ္ဘာ ပျက်သလား အောက်မေ့ရတယ်.. ဒီလူကို ဘယ်သွားတယ် ဘာလုပ်တယ် စသဖြင့် အ ကုန်ရေးတော့တာပဲ.. ရောဂါပိုး ရှိသူ ကို အပြစ်သားသဖွယ် ပုံဖော်ကြတယ်…။အသိဉာဏ်နိမ့်ပါးတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
Credit : (Maung Myint)
မွနျမာပွညျမှာ ဖွဈနတောက ထိတှေ့ လူနာတှေ ပိုးရှိ လူနာတှေ နထေိုငျရာ အနီးအနား သှားပွီး live တှေ လှငျ့ပွီး ဘာလုပျကွတာလဲ နား မလညျဘူး.. လူတှကေို ပို အထိတျတလနျ့ ဖွဈစေ တယျ မဟုတျလား ? အခုပဲ မွနျမာပွညျကွီး ပကျြတော့မယျ့ အတိုငျး ရေးပွော နကွေ တယျကနျြးမာရေးဌာနက ထုတျပွနျထားတာတှကေို လိုကျနာမယျ.. Mask တပျမယျ.. လကျဆေးမယျ.. လူစုလူဝေး ရှောငျမယျ.. ။
ကူးစကျ ခံရသူနဲ့ ထိတှခေဲ့သူတှကေလညျး သကျဆိုငျရာ ကို အခြိနျမှီ သတငျးပို့မယျ.. Q ဝငျမယျ.. တာဝနျသိသိ လိုကျနာရငျး ဒုတိယလှိုငျး ကို ကြျောဖွတျရဖို့ လုပျရမယျ.. သတငျးတှဖှေ ကိုယျတိုငျလညျး ကွောကျ အခွားသူတှကေိုလညျး အကွောကျ တရား လိုကျသှငျးပွီး ဘာ လုပျကွမှာလဲ။လကျရှိ တဈမိနဈကို လူတယောကျနှုနျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ ခံနရေတဲ့ ဂြာမနီမှာ ကြှနျတျော နပေါတယျ။
စိုးရိမျထိတျလနျ့ပွီး အိမျထဲအောငျးနလေို့ မရပါဘူး.. လူတိုငျး ကိုယျဆီ တာဝနျတှေ အရ အပွငျကို ထှကျနရေပါတယျ.. ကနျြးမာရေးဌာနက ညှနျကွားတဲ့ အတိုငျး Mask တပျတယျ လကျဆေးလို့ ရတဲ့ နရောတိုငျးမှာ လကျကို ဆေးပါတယျ.. အခွားသူ တဦးဦး နဲ့ အနညျးဆုံး (၆)ပေ အကှာမှာ နပေါတယျ…။ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရတိုငျး မသပေါဘူး.. ။
သို့သျော ကူးစကျမှု မခံရဖို့တော့ အရေးတကွီး ကာကှယျရမှာ ဖွဈပါတယျနားမလညျနိုငျတာက မွနျမာနိုငျငံဘကျက ကိစ်စတှေ ကိုပါ.. ရပျ ကှကျထဲ လူတယောကျ ရောဂါပိုးတှတေ့ာ နဲ့ ကမ်ဘာ ပကျြသလား အောကျမရေ့တယျ.. ဒီလူကို ဘယျသှားတယျ ဘာလုပျတယျ စသဖွငျ့ အ ကုနျရေးတော့တာပဲ.. ရောဂါပိုး ရှိသူ ကို အပွဈသားသဖှယျ ပုံဖျောကွတယျ…။အသိဉာဏျနိမျ့ပါးတယျလို့ပဲ ပွောပါရစေ။